FARO waxay ku soo bandhigi doontaa tikniyoolajiyadeeda 3D ee himiladeed ee geospatial iyo dhismaha Shirka World Geospatial 2020 - Geofumadas
FARO waxay ku soo bandhigi doontaa tikniyoolajiyadeeda 3D ee himiladeed ee geospatial iyo dhismaha Shirka 2020 World Geospatial Forum
Janaayo, 2020 GPS / Qalabka, tabo cusub
Si loo muujiyo qiimaha tikniyoolajiyada geospatial ee dhaqaalaha dijitaalka ah iyo dhexgalka ay la leedahay tikniyoolajiyada soo ifbaxay ee dhinacyada kala duwan ee shaqada, shirka sanadlaha ah ee World Geospatial Forum ayaa la qaban doonaa Abriil soo socda.
FARO, isha adduunka ugu kalsoon ee loogu talagalay cabbirista 3D, sawir qaadista iyo xaqiijinta tikniyoolajiyadda, ayaa xaqiijisay ka-qaybgalkeeda World Geospatial Forum 2020 iyada oo ah Maal-gelinta Shirkadaha. Dhacdadu waxay dhici doontaa laga bilaabo Abriil 7 ilaa 9, 2020 goobta Taets Art & Event Park, Amsterdam, Netherlands.
FARO waxay u keentaa aragti muhiima iyo qiimeyn qaybaha geospatial iyo dhismaha iyadoo xalka ay kujiraan Digital Construction, Mataanaha Digital, Wadashaqeynta Cloud, Xaqiiqada Xawaaraha Sare, iyo kuwo kale. Wufuudda ka socda World Geospatial Forum waxay awoodi doonaan inay khibrad u yeeshaan xalalkaan iyo kiisaskooda adeegsiga ee bandhigyada FARO, iyo sidoo kale ballanqaadyo kala duwan oo sheybaar ah oo ku jira barnaamijyada warshadaha.
Madaxweyne kuxigeenka Andreas Gerster ayaa yiri "World Geospatial Forum waa meesha lagu kulmo hogaamiyaasha fikradaha waxaanan ka wada hadli doonaa isbedellada ugu dambeeyay ee ku saabsan cilmiga joloolajiyada iyo ku saabsan astaamaha qulqulka shaqooyinka dhismaha, injineerinka iyo dhismaha," ayuu yiri Andreas Gerster, Madaxweyne kuxigeenka. ee Iibka Dhismaha Caalamiga ah ee BIM. “FARO waa mid ka mid ah wadeyaasha ugu waaweyn ee hal-abuurka tan iyo maalmihii ugu horreeyay ee tirakoobka. World Geospatial Forum wuxuu noo ogolaanayaa inaan soo bandhigno qalabka korantada iyo xalka softiweerka kaas oo xaqiijinaya in kumanaan macaamiil ah oo aduunka oo dhan ka faa iidaystaan ​​qabashada xogta saxda ah ee 3D, qabashada xogta deg degga ah ee fudud, dhimista mashruuca iyo yaree qashinka oo kordhi faa iidada. Waxaan rajeyneynaa inaan kala hadalno kaqeybgalayaasha ganacsigaaga oo aan falanqeyno sida FARO ay kaaga caawin karto inaad qulqulka shaqadaada u noqdo mid ka sii fiican. ”
Xalka tikniyoolajiyadda aragtida farsamada ee 3D ee FARO waxay u ahayd soo jiidasho weyn xagga dhismaha, dhismaha iyo injineerinka (AEC) ee Shirka Geospatial World sannadihii la soo dhaafay. Hoggaanka shirkaddu ma ahan oo keliya inuu wado wadashaqaynta labada xisbi ee AEC, laakiin waxay noqotey qodob muhiim ah maadaama ay warshadu sii wadayso u dhaqaaqista dhinaca dijitalisnimada.
“Laga soo bilaabo sannadihii la soo dhaafay, Geospatial Media waxay diiradda saareysay horumarinta jiritaankeenna suuqa AEC, maadaama aan aaminsanahay in tikniyoolajiyada geospatial ay fure u noqdeen qaybtaan. Waxaan ku faraxsanahay oo waajib nagu ah inaan sii wadno taageerada joogtada ah ee shirkadda FARO oo aan ku rajo weynahay iskaashi kale oo miro dhal ah oo aan la yeelanno FARO sannadkan World Geospatial Forum, ”ayuu yiri Anamika Das, Ku-xigeenka Madaxa Fidinta iyo Horumarinta Ganacsiga ee Warbaahinta Geospatial Media iyo Isgaarsiinta. .
Ku saabsan FARO
FARO® waa isha ugu kalsoon adduunka ee cabbiridda 3D, sawiridda iyo xaqiijinta tikniyoolajiyadda. Shirkaddu waxay horumarisaa oo soo saartaa xalal cidhiidhi ah oo awood u siinaya qabashada 3D-sax sax ah, cabbirid iyo falanqayn noocyo kala duwan oo warshadeed ah, oo ay ku jiraan wax soo saarka, dhismaha, injineernimada iyo amniga dadweynaha. FARO waxay siisaa khubarada AEC tikniyoolajiyadda ugu wanaagsan ee teknoloojiyada hiddaha iyo bar tilmaameedka software daruuriga u oggolaanaya inay ku qaataan goobahooda dhismaha iyo kaabayaasha aaladda dhijitaalka ah (dhammaan marxaladaha noloshooda oo dhan). Macaamiisha AEC waxay ka faa'iideystaan ​​soo qabashada xog dhameystiran oo tayo sare leh, howlo dhakhso leh, kharashyada mashruuca, dhimista qashinka iyo faa iidada badan.
Ku saabsan World Geospatial Forum
World Geospatial Forum waa kulan sanadeedka in kabadan 1500 oo xirfadlayaal ah iyo hogaamiyayaal geospatial ah oo matalaya gebi ahaanba deegaanka geospatial: siyaasadaha guud, wakaaladaha khariidadaha qaran, shirkadaha waaxaha gaarka loo leeyahay, ururro badan oo horumarineed, hey'ado cilmiyaysan iyo tacliin iyo, dhammaan waxkasta , dhamaadka adeegyada isticmaala dowladda, ganacsiga iyo adeegyada muwaadiniinta. Mawduuca 'Isbedelka dhaqalaha ee xilligii 5G - Qaabka geospatial', daabacaaddii 12aad ee shirku wuxuu soo bandhigayaa qiimaha tikniyoolajiyada geospatial ee dhaqaalaha dijitaalka ah iyo is-dhexgalka tikniyoolajiyada soo ifbaxaya sida 5G, AI, gawaarida iskood u taagan, Xogta Weyn, Cloud, IoT iyo LiDAR ee warshadaha kala duwan ee adeegsadaha, oo ay ku jiraan magaalooyin dijital ah, dhismaha iyo injineernimada, difaaca iyo amniga, ajendaha horumarinta adduunka, isgaarsiinta iyo sirdoonka ganacsiga. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan shirka ka baro www.geospatialworldforum.org
Kulankan sharafta leh wuxuu ballaarin doonaa aqoonta ku saabsan baaxadda iyo faa'iidooyinka tikniyoolajiyada geospatial-ka waxayna soo bandhigi doonaan xalal wax ku ool ah oo wax ku ool ah oo gacan ka geysta hagaajinta booska nagu wareegsan.
Post Previous«Previous Waa maxay isolines - noocyo iyo dalabyo
Post Next Twink Digital - Falsafad loogu talagalay kacaanka cusub ee dhijitaalka ahNext »